Brexit: Maxkamadda Sare oo tuurtay racfaankii Xukuumadda – Kasmo Newspaper
Brexit: Maxkamadda Sare oo tuurtay racfaankii Xukuumadda
Updated - January 24, 2017 1:12 pm GMT
London (Kasmo); Maxkamadda Sare ee Britain ayaa ku gacan sayrtay maanta racfaan xukuumadda Theresa May ka qaadatay bishii Nofembar, go’aankii darajada 1aad ee Maxkamadda oo dabrayay dhaqangalinta qodobka 50aad ee ka bixitaanka Midowga Yurub.
8 ka mid ah 11ka Garsoore ayaa isku raacay in Aftidfii 23kii Juun ee ka bixitaanka Midowga Yurub lahayd qiime wada-tashi oo qur ah (consultative).
Sida darteedna Xukuumaddu lahayn awood ay ku dhaqaajiso qodobka 50aad ee heshiiskii Lisbon, iyada oo marka hore an la soo marsiin Barlamaanka.
Xukuumadda Muxaafidka ah ayaa ka xumaatay go’aanka, waxayse ku naallootay, sida uu sheegay Jeremy Wright, Xeer-ilaaliyaha Guud ee Kiiskaan, in wakhti dheeri ah loo helay fulinta hawshaas.
Afhayeen u hadlay Downing Street ayaa xaqiijiyay in dadweynaha Uk u codeeyeen sidii looga bixi lahaa Midowga Yurub, Xukuumadduna xurmayn doonto rabitaankooda.
Wuxuu shaaca ka qaaday in Xukuumaddu bilaabi doonto dhaqangalinta qodobka 50ad, sidii qorshaysnayd, dhammaadka bisha March.
Gina Miller, ganacsatadii bilowday dacwadda ayaa si guul ku dheehantahay u caddeysay: “Barlamaanka oo qur ah ayaa madaxbannaan, mana jiro Ra’iisal wasaare iyo Xukuumad qur ah oo an filan karin in hawlaheeda la daba gali karo lana qiimayn karo”.
Xukuumadda ayaa xoogaa Samir siin ah u qaadatay iyada oo ka badbaadday in khasab looga dhigo la tashiga Barlamaannada Wales, Ireland-ta Woqooyi iyo Scotland, sida uu sheegay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Lord David Neuberger.
Tala galinta 3daas Barlamaan ayaa ku noqon lahaa Xukuumadda dabin siyasadeed, mar haddii saddexduba ka soo horjeedaan in laga baxo Midowga Yurub.
Maxkamadda Sare ayaa xaqiijisay in ujeeddadeedu ahayn sidii loo baddeli lahaa go’aankii Aftida, waxayna hoosta ka xarriiqday in xaalku hadda siyaasi yahay ee sharci uusan ahayn.Ereyadii Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Lord Neuberger waxaa ka mid ahaa:
“Britain ma laha Dastuur qoran oo la raaco, laakiin in Xukuumadda loo oggolaado in ay u dhaqanto sidii boqortooyadii hore waxay xadgudub ku noqonaysaa mabaadii’da Xeerarka soojireenka ah. Taas oo ka dhigan in dib loogu noqonayo awooddii kali taliska ahayd ee sannadkii 1215kii looga soo gudbay qoritaankii Magna Carta”.
Saadaasha guud ayaa ah in aanu jiri doonin xisbi qur ah oo si toos ah uga horimaada qodobka 50aad, si uusan ugu muuqan mid ka soo horheeda rabitaanka dadweynaha.
Xisbiga Labour-ka ayaa qaba in codbixinta Barlamaanku noqoto mid macne leh, iyada oo Xukuumadda lgula gorgortamayo qodobbada qaarkood.
Xisbiga Liberl-Democrat ayaa qaba in ka bixitaanka kama dambaysta ah ee Midowga Yurub loo qaado Afti 2aad, si dadweynaha loo siiyo fursad ay dib uga fikiraan.